Ururka CPJ oo Cambaareeyay Taliska Wayaanaha. | ogaden24
Ururka CPJ oo Cambaareeyay Taliska Wayaanaha.
Ururka Committee to Protecect Lournalists (CPJ) ayaa soosaaray qoraal dheer oo uu kaga hadlayo xaalada murugsan ee wadanka Itoobiya iyo dhaqanka beenta kusalaysan ee wayaanaha.
Ururka CPJ oo sifiican uga hadlay xaalada gumaysiga Itoobiya ayaa sheegay in ay aad uga walaacsan yihiin xaalada dadka faraha badan ee kuxidhan xabsiyada wadanka Itoobiya, gaar ahaan wariye yaasha kubahdilan xabsiyada Itoobiya.
Committee To Protecect Journalists ayaa sheegay ay markii hore soo dhaweeyeen hadalkii taliska wayaanaha ee ahaain lasiidayn doono hase yeeshee waxaan aad uga xunahay ayay dhaheen sida ay ula dhaqmeen dadka faraha badan ee uu kamidyaha Iskindir Naga oo ahaa nin wariye ah oo caan ah.
Wariye yaasha iyo dadka kale ee xadhan ayay CPJ sheegtay in lagu xidhay shuruud ah in ay sixiixaan waraaq lagu duudsiyayo xaqooda oo ah in ay qirtaan dambiyadii lagu soo oogay, waxaana waraaqdaas diiday ayay dhaheen dad badan oo uu kijiro Wariye Iskinder Naga.
Ururka CPJ ayaa sheegay in xukuumada wayaanuhu aysan rabin in xal laga gaadho arimaha murugsan ee wadanka Itoobiya, waxayna intaas kudareen in loobaahan yahay in lala xisaabtamo taliska wayaanaha.
Dhinaca kale xukuumada wayaanaha ayaa sheegtay in ay siidayn doonto dad badan oo buuxiyay shuruudihii ay kuxidheen, waxayna sheegeen in ay todobaadada soosocda siidayn doonaan.